Shirkad - Gpedia, Your Encyclopedia
Kani waa maqaal ku saabsan Shirkad.
Shirkad (ingiriis: company; carabi: شركة) sida caalamiga ah waa xubin, ama tiro badan oo dad ah, arin ka mideysan, ama dhexdhexaad ka ah, kuwaasi oo wadaaga danguud ama gaar ahaaneed. Micnaha kale ee Shirkad xambaarsan tahay luuqada Af Soomaaliga dhexdiisa waa isku xidhka meherad weyn oo leh goobo ganacsi ku yaalo deegaano badan oo kala duwan.
Shirkado ganacsi, kuwo si gaar ah loo leeyahay, kuwo u adeega bulshada, kuwo u shaqeeya dowladaha iyo noocyo kale oo badan oo shirkado ah ayaa jira caalamka. Dhamaantood waxay ka mideeysan yihiin magaca iyo in badan oo qawaaniinta aasaasiga ah. Shirkadaha caanka ah waxaa ka mid ah Shirkada Isgaariinta Somcable, Shirkada Microsoft, Shirkada Google iyo kuwo kale oo badan oo caalami iyo wadani iskugu jira.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Shirkad&oldid=195318"